'Nkpughe nke' Becka Paulson 'nke Stephen King Gwara CW
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Nkpughe nke' Becka Paulson 'nke Stephen King Gwara CW
by Waylon Jọdan July 21, 2020
by Waylon Jọdan July 21, 2020 975 echiche
CW ahọrọla ikike imeghari na Stephen King si obere akụkọ "Mkpughe nke 'Becka Paulson" n'okpuru aha ọrụ Nkpughe dị ka Oge ikpebi.
Mgbe ọ gbagbusịrị onwe ya na ụbụrụ ya na mberede na egbe ntu, Pollyanna-ish Becca Paulson na-akpọrọ ya karịa ya ka ọ bụrụ "onye a họọrọ" na ịkwụsị apocalypse. Iji zọpụta ụwa, Becca ga-egosiputa na ụwa anyị nwere ike ịlaghachi azụ - ga-amalite site na obodo ya dị n'etiti ọdịda anyanwụ.
Maisie CulverIkpeazụ Man Dịwara) iji dozie usoro a dabere na akụkọ Eze, Katie Lovejoy ga-abụkwa onye isi ọrụ.
E bipụtara akụkọ ahụ na mbụ nke Rolling Stone laa azụ na 1984 ma jiri ya mee ihe maka isi mmalite nke mbipụta 1990 nke Oke Mpụga (dị na foto a). Ihe omume ahụ mere ka Catherine O'Hara (Schitt's Creek), John Diehl (Stargate), na Steven Weber (na Steven Weber)The mbadamba na-egbuke Obere-usoro). Weber duziri ihe omume ahụ.
Ọ bụ ezie na etinyeghị ya na otu n'ime ịnakọta King, a gbanwere ya dị ka ụzọ aghụghọ na akwụkwọ akụkọ ya Ndị Tommyknockers.
Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ka Culver si gbasaa obere akụkọ dị na usoro, ọ bụ ezie na enwere obi abụọ na ọtụtụ ohere dị na nkọwa ya.
iHorror ga-ezitere gị Nkpughe ka nkọwa ndị ọzọ bịara dị.